Sida loo sii qulquli Video qaab kasta oo ka PC in TV isticmaalaya Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
Waxaad dhahdaa "Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah" oo inta badan dadka unbaa qabaa kulan video. Yar oo loo yaqaan waa in aad u isticmaali kartid Console in qulquli videos ka computer si aad TV. In kasta oo qaar ka mid ah telefishanka waa DLNA-diyaar, kuu oggolaadaan in aad xiriiriyaan TV shabakad gurigaaga u file sharing, waxaad weli ka heli doontaa Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah arrin waxtar leh haddii aad TV kuma jiraan habkaani.
Si aad u sii qulquli videos ka PC in TV, waa in aad marka hore hubi in files warbaahinta aad waxaa taageera Madaxweyne Siilaanyo. Inkasta oo la sheegay in Microsoft ayaa ka shaqeyneysa kordhaya tirada qaabab ay taageerayaan, qaabab qaar ka mid ah ayaa weli aan la aqoonsan karin. Laakiin ha ka welwelin! Just raaco waxbarashada hoose si aad u sii qulquli qaab video ka PC in TV isticmaalaya Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah wax, ha la taageero ama aqlka. Si aad u raaxayso video shaashadda weyn, u isticmaalaan graphic info this si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Qeybta 1: Stream Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ay taageerayaan Video qaabab
Qeybta 2: qulquli Video Qaabka kasta oo Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
Waa sahlan in ay sii qulquli Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah qaabab video taageeray. All inaad samayso waa goobaha qaar ka mid ah si aad u samaysay shaqada.
Talaabada 1: In loo sahlo ku "Play To" function
Hubi in Madaxweyne Siilaanyo iyo computer ku jira shabakad isku mid ah. Markaas helaan "Meeshay" menu on your Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah. Oo halkaasaannu ka, waxay helaan "rabtid" doorasho iyo in la hubiyo "Play To" waa karti. Tallaabooyinkan waxay oggolaan doontaa in aad Console in ay multimedia riixay ka PC kasta.
Hadda waxaad u isticmaali kartaa "Play To" feature in ay si fudud u sii qulquli aad video in Madaxweyne Siilaanyo. Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan si ay u isticmaalaan habkaani, iyadoo ku xiran Windows version.
1. Head galay qaybta "Qalabka iyo madbacado" oo ah guddi ay gacanta. Oo halkaasaannu ka, guji "Add Device" waana in aad aragto Console sida khiyaar ah. Marka aad ku aragto, waxay doortaan, oo guji "Add qalab this".
2. Raadi file multimedia ee aad kombuutarka in aad rabto in aad la wadaagto, si fudud xaq guji ku yaal, ka dibna dooro "Play To", ka dibna dooro magaca Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah.
3. Windows Media Player arbushin doonaa, oo sii qulquli doonaan warbaahinta la rabay in aad Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah.
In Windows 8.1, Microsoft ayaa bixiyay "Play To" sida "Play" iyo bedelay jidkii aad ka heli shaqeynta ka soo jiidashada Device iyo Murayaad. Laakiin weli waxa aad ka heli kartaa adigoo raacaya talaabooyinka hoos ku qoran:
1. Dul PC & qalabka> Qalabka. Fiiri liiska aaladaha Play aad. Haddii Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah uusan ka muuqan, guji "Add qalab" ka dibna dooro qalabka ka mid ah liiska.
2. Wuxuu furaa app Madaxweyne Siilaanyo Oo Video, oo ay bilaabaan file aad rabto in aad sii qulquli ciyaaro.
3. Kaadhkaaga ka laayeen midig ama aad dhaqaajiso dulqabo mouse ku teedsan ku laayeen gacantiisa midig si uu u furo qardhaasaha Windows ka Menu.
4. Marka Menu ka qardhaasaha soo booda, dooro Qalabka iyo doorasho ee Play.
5. Waxaad markaas arki doonaa adiga Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ku qoran. Tubada waxa ku iyo video la huleeshay doonaa in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah.
Waa wax fudud in la sii qulquli Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah oo ay taageerayaan qaabab video, laakiin waxa aad file video aan ay taageerayaan Madaxweyne Siilaanyo? Ha welwelin! Halkan waxaan ku talinaynaa in xal loo helo - Wondershare Video Converter Ultimate . Waxaa gelineya inaad sii qulquli Madaxweyne Siilaanyo Oo qaabab aqlka kaliya click ah. Hadda kaliya download raad xorta ah iyo Raac tallaabooyinka hoose si aad u aragto sida ay u shaqayso.
Talaabada 1: dejinta aad video files si software
Hubi in Madaxweyne Siilaanyo iyo PC waa in shabakad isku mid ah. Markaas abuurtaan barnaamijka "Media Server" adigoo gujinaya icon ku desktop-ka. ("Media Server" dhaqmaa sidii awood plugin-in ka mid ah Wondershare Video Converter Ultimate, kaas oo kaa caawinaysaa in aad sii qulquli qaab video kasta in Madaxweyne Siilaanyo.) Ka dib markii in, si toos ah jiidi oo hoos u video files aad rabto in aad soo tuurtay barnaamijka ama caleenta dhan files warbaahinta ku kaydsan on your computer by riix "Computer" icon.
Bilow hoorto adigoo riixaya "Kabka" button (waa rukun midig ee hoose). Waxaad kaloo samayn kartaa talaabo geeyo adigoo click on badhanka kabka ka mid ah halka ciyaaro file ee ciyaaryahan warbaahinta.
Talaabada 3: Xakamee loo maqli karo ee
Ka dib marka aad si guul leh ku qulquli ka kooban, waxaad xakamayn kartaa mugga iyo fursadaha kale ee loo maqli karo ee shaashadda TV ka guddi media player ama qofka xukuma TV aad ka.
> Resource > Video > Sida loo sii qulquli Video qaab kasta oo ka PC in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah